Ungazikhusela njani kwiimali zokuhlukunyezwa emsebenzini - Okunye
Ungazikhusela njani kwiimali zokuhlukunyezwa emsebenzini
Nokuba yeyiphiuhlobo lokuhlukumezaKuyatyholwa, ukujongana nezityholo zokuhlukumeza emsebenzini kuyothusa. Ungaphulukana nomsebenzi wakho xa kufunyaniswe ukuba ukhathaze umntu ophangela naye. Nangona kunjalo, zikho iindlela zokuzikhusela ezinokubangela ukuba izityholo ezibekwa kuwe zifumaneke zingenasiseko.
Ummeli wenkampani yabasebenzi (HR), umphathi okanye umphathi uxelela umqeshwa otyholwa ngokuhlukumeza izityholo abekwa zona. Okwangoku, umqeshwa otyholwayo angaqala ukuthatha amanyathelo okuzikhusela nokuzikhusela.
Ingcaciso ngokuXhatshazwa eMsebenzini
Ukubambisana nokuba ngumzali weNarcissist
Indlela yokujongana namaLungu oSapho aNzima
Inyathelo 1: Cwangcisa iNtlanganiso
Inyathelo lokuqala emva kokwaziswa ukuba umntu osebenza naye ufake kuye ityala lokuhlukumeza kukucwangcisa intlanganiso nomphathi wakho we-HR, umphathi kunye nomphathi wenkampani. Ukuba ulilungu leyuniyoni, cela ukuba iyunion ithumele umntu entlanganisweni.
Ukusukela ukuba indibano yokuqala apho waxelelwa khona ngezityholo isenokungabandakanyi wonke umntu, intlanganiso ecwangcisiweyo kwisicelo sakho isebenza njengendlela yokufumana ulwazi malunga nezityholo ezilindelwe kuwe kubo bonke abaphathi bakho kunye nokuqinisekisa ukuba wonke umntu uyazi ukuba kwenzeka ntoni ivuliwe.
Kule ntlanganiso, buza imibuzo ethile malunga neentlawulo, kubandakanya:
Ngubani owenza intlawulo?
Zithini iinkcukacha zerhafu?
Yenzeka nini le mihla yokuxhatshazwa?
Ngaba akho amangqina okuhlukunyezwa?
Luhlobo luni lobungqina, ukuba bukhona, oluchithiweyo ngokuchasene nawe?
Cela iikopi zabo bonke ubungqina nengxelo yamangqina eyaqokelelwa yaza yasetyenziswa njengesiseko sentlawulo yokuhlukumeza. Ukuba azinikwanga kwangoko, cela ukuba zibonelelwe ukuphela kosuku ukuze uphinde uziqwalasele kwaye uqale ukulungiselela ukuzithethelela. Ukuba kukho imfuneko, yichaze into yokuba uza kuma ngumphathi we-HR ngexesha elithile phambi kokuphela kosuku ukuze uthathe iirekhodi.
Qaphela ukuba ukujongana nezityholo zokuhlukumeza emsebenzini ayiyonkqubo yezomthetho kwaye, ngenxa yoko, umphathi weHR kunye nabaphathi bakho akufuneki bakunike naluphi na ulwazi okanye amaxwebhu malunga nezityholo. Nangona kunjalo, uninzi luyakwenza oko ukuba uyabacela kwaye utsho ukuba awuzukunxibelelana nommangaleli wakho okanye nawaphi na amangqina ngaphandle kokumelwa yi-HR okanye nabaphathi bakho.
Inyathelo 2: Hlaziya amaXwebhu kwaye uqokelele ubungqina
Hlaziya amaxwebhu owanikiweyo kwaye uqaphele imihla, amaxesha kunye nohlobo lwesityholo sokuhlukumeza. Qaphela kwakhona ukuba akho na amangqina. Nje ukuba wenze uluhlu lolu lwazi, yenza uluhlu lwakho ezimbini: elinye lamaxwebhu ukuqokelela ukuzikhusela kunye nelinye lamangqina ukubuza.
Amaxwebhu ngokubanzi axhasa ubumsulwa bakho
Naluphi na uhlobo lwamaxwebhu abonisa ukuba into etyholwa ngomhla othile okanye ngokubanzi ayenzekanga iyakuxhasa ukuzithethelela kwakho. Oku kunokubandakanya:
Ii-imeyile phakathi kwakho, ummangaleli, okanye ingqina ejongana ngqo nayo nayiphi na into yokuhlukunyezwa ekuthiwa yenzekile-Ezi zilungile ngakumbi kuba zinokuprintwa kwaye zenziwe umhla.
Amaphepha okanye amanye amaxwebhu aphikisa inxenye okanye zonke izityholo -Oku kungabandakanya iphepha lamaxesha elibonisa ukuba wawungekho eofisini ngala mhla kwathiwa yenzekile okanye imemo evela entlanganisweni ebonisa ukuba wawukwenye indawo ngexesha lesityholo sokuhlukumeza. Inokubandakanya amaxwebhu abonisa ukuba awuzange wenze okanye uthathe inxaxheba kwizityholo okanye izenzo zokuhlukumeza, ezinje ngememo ebhalwe ngomnye umntu.
Ezinye iintlobo zobungqina, ezinje ngeteyiphu yokhuseleko -Ukuba inkampani yakho ibeka iliso rhoqo ezindleleni nakwezinye iindawo zeshishini, ukurekhodwa kweendawo ekutyholwa ukuba kwenziwe kuzo kungabonakalisa ukuba khange kwenzeke. Ngamanye amaxesha, umphathi wakho we-HR kuya kufuneka acele iikopi zezi rekhodi, kodwa unganikezela ngeendawo, imihla, kunye namaxesha eetheyiphu ekufuneka zicelwe ukwenza lo msebenzi ube lula.
AmaNgqina kunye neAlibis
Amangqina aquka abo bantu umtyholwa wakho axhomekeke kubo ukuxhasa ibango lakhe kunye nabo unokusebenzisa ukuxhasa ukuzithethelela kwakho. Kuqala, yenza uluhlu lwazo ezixhasa izityholo zommangalelwa zichaze ixesha neziganeko abazibonileyo. Uya kuyisebenzisa kamva kudliwanondlebe nabo.
Okwesibini, yenza uluhlu lwamangqina onokuthembela kuwo xa uzithethelela. Uluhlu lwamangqina oza kubuza egameni lakho kufuneka lubandakanye nayiphi na i-alibis. Faka imihla kunye namaxesha ababone ngayo nantoni na enxulumene nezityholo kunye neengxelo ngokubanzi okholelwa ukuba bangazenza. Oku kuyakunceda ekukhumbuleni oko ungathanda ukuba bakuthethe egameni lakho ngalo naluphi na udliwanondlebe.
Inyathelo 3: Bhala phantsi inguqulelo yakho yeziganeko
Emva koko, bhala phantsi okwenzekileyo. Nikezela ngeenkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka, kubandakanya imihla, amaxesha, abantu kunye ne-alibisi ababekhona, nayo nayiphi na enye into enxulumene nokuxhatshazwa. Nika ulwazi oluninzi ngangokunokwenzeka, kodwa ungaphambuki kwindawo ephambili ekubhaleni kwakho. Ekupheleni kwenguqu yakho yeziganeko, bhala isivakalisi uchaze ukuba yonke into oyithethileyo iyinyani, bhala iphepha, kwaye usayine igama lakho.
Inyathelo 4: Thetha no-Alibi wakho
Ukuba unomntu osebenza njenge-alibi yakho, cela ukudibana naye ukuze nixoxe ngale meko. Ngexesha lentlanganiso, chaza izityholo ojongene nazo kwaye unike iinkcukacha zazo. Emva koko, nika iinkcukacha zamaxesha obekhona i-alibi yakho ukuze azazi ezona meko ungathanda ukuncediswa kuzo. Cela i-alibi yakho ukuba ibhale phantsi kwaye isayine uxwebhu oluneenkcukacha zeziganeko njengoko azibonileyo.
I-alibi yakho isenokungafuni ukubandakanyeka kule meko okanye ukudibana nawe wedwa. Sukuyithatha buqu le nto, kodwa endaweni yoko cela ukuba ulwazi olunokubonelelwa ngu-alibi lwakho lucelwe ngummeli wakho we-HR okanye ukuba i-alibi yakho ibe nodliwanondlebe nommeli wakho we-HR okanye abaphathi.
Inyathelo 5: Nika amaXwebhu
Inyathelo elilandelayo kukunika onke amaxwebhu uwaqokelele kumphathi wakho we-HR nakubaphathi. Oku kubandakanya onke amaxwebhu owaqokelele ukuzikhusela, anje ngee-imeyile okanye ezinye iirekhodi, ingxelo yakho yeziganeko, kunye negama kunye nayo nayiphi na ingxelo evela kwi-alibi yakho. Yabelana ngale nkcukacha nommeli womanyano wakho, ukuba uyasebenza.
Xa ufaka olu lwazi, xela ukuba uya kunika onke amaqela iintsuku ezi-3-4 zokuphonononga kwaye uyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo. Cela ukuba intlanganiso icwangciswe nabaphathi bakho, ummeli we-HR, kunye nommeli womanyano (ukuba ukhona) ukuphonononga ulwazi olunikezile ekupheleni kweentsuku ezi-3-4.
Okwangoku, ukuba ngaba i-alibi yakho ibonakalisile ukuthandabuza ukubandakanyeka, cela ummeli wakho we-HR ambize kudliwanondlebe. Cela ukuba ubekhona ngexesha lodliwanondlebe, kodwa qaphela ukuba oku akunakunikwa ngokuxhomekeke kwindlela ummeli wakho weHR oziva ngayo ukuba kulungile ukuqhubeka. Ukuba awufakwanga, cela ukuba lonke ulwazi olunikwa yi-alibi yakho lurekhodwe ukuze ube nakho ukulujonga kwakhona kwixa elizayo.
Uluhlobo olunjani lomfundi onokuphrinta imibuzo
Ukuba sele uthethile ne-alibi yakho, buza ukuba ngaba ummeli wakho we-HR angathanda ukumfaka entlanganisweni.
Inyathelo 6: Dibana ukuphonononga ubungqina
Dibana nommeli wakho we-HR, umphathi, umphathi, kunye nommeli wemanyano yabasebenzi ukuze nixoxe kwaye niqwalasele kwakhona ulwazi olunikezile. Ukuba ngaba i-alibi yakho ikho, cela ukuba kwenziwe udliwanondlebe okanye uqiniseke ngohlobo lweziganeko.
Ngexesha lentlanganiso, buza:
Zeziphi izityholo eziye zagxothwa ngenxa yobungqina obubonelelweyo
Zeziphi iintlawulo ezisahleli ezinokuphikiswa
Nokuba umtyholwa wakho unikwe obu bungqina nokuba uphendule wathini
Emva kokubonelela ngamaxwebhu, i-alibi, kunye nengxelo yeziganeko, uyakufumanisa ukuba uninzi okanye zonke izityholo ezibizelwe wena zichithiwe. Ukuba akunjalo, cela onke amangqina okuhlukunyezwa ukuba axoxwe phambi kwakho, ukuba kunokwenzeka.
Inyathelo 7: Cinga ukumela abameli
Ukuba ubunikile bonke ubungqina bakho, iingxelo zamangqina, kunye ne-alibi kubaphathi bakho kwaye wafumanisa ukuba akukho nasinye isityholo obekwa sona esachithiweyo, unokucinga ngokuqesha igqwetha. Igqwetha lingakunceda ekuzithetheleleni ukuze irekhodi lomsebenzi wakho lingabinaziphumo zibi.
Inyathelo 8: Dlan 'indlebe namaNgqina
Ngeli nyathelo, dibana nommeli wakho we-HR, umphathi, umphathi, ummeli womanyano, kunye nengqina lokuhlukunyezwa ukuze nixoxe ngento ebonwe okanye eviweyo. Uya kuvunyelwa ukuba ubuze amangqina imibuzo, enokubandakanya:
Kuthethwe ntoni kanye kanye?
Yintoni kanye kanye eyenziweyo?
Kwakucacile nini kwingqina ukuba oku yayikukuhlukumeza, kwaye ukuba kunjalo, ngaba oku kwakucacile ngexesha lesiganeko okanye kamva emva kokubuzwa malunga naloo mntu wayehlukumezekile?
Injongo yolu dliwanondlebe kukubonisa ukuba ingqina alingeva okanye liyibonile into eliyibangayo okanye alithathi njengokukuhlukumeza de umntu otyholwa ngokucela ukuba abe lingqina. Le yokugqibela ibaluleke kakhulu kuba ibonisa ukuba izenzo zakho bezingengcungcuthekiso, kodwa zithathwa kuphela ngumntu otyholwa ngokukhathaza.
Inyathelo 9: Dibana naBaphathi kunye noMmangaleli
Inyathelo lokugqibela kukubamba intlanganiso apho onke amaqela aphambili kolo xhatshazo atyholwa khona. Oku kubandakanya wena, abaphathi bakho, abameli bemibutho yabasebenzi, ummeli we-HR, kunye nomntu ohlawulisa amabango okuhlukumeza. Kuxhomekeke kumgaqo-nkqubo wenkampani, amangqina kunye neealibis zisenokungabandakanywa. Le asiyongxaki kuba aba bantu sele benodliwanondlebe.
Kule ntlanganiso, musa ukuba ndlongondlongo okanye ube nomsindo. Kwakhona, sukujongana ngqo nxamnye nomtyholwa wakho. Endaweni yoko, cela ukuba izityholo ngokuchasene nawe, ubuncinci ezo zisamile, ziphindaphindwe. Emva koko, xoxa ngendlela ubungqina obubonileyo obuphikisa ngayo ezo zityholo. Okokugqibela, buza esiphi isigqibo abaphathi bakho abagqibe kuso.
Ngeliphi na ixesha kufuneka uxele ukuba ubandakanyeka ekuhlukumezeni okanye uyazisola ngezo zinto uzenzileyo zithathwa njengokuhlukumeza. Ukwenza njalo kungakushiya uvulekele ukuqhubekeka nezityholo zokuhlukunyezwa, nokuba usemsebenzini okanye enkundleni, kwixesha elizayo.
Nje ukuba kungqinwe izityholo obekwa zona, unokujamelana nokuziphindezela nokuba kungummangaleli wakho okanye abanye abantu osebenza nabo. Ukuba uziva ngathi ujolise ekuziphindezeleni, gcina irekhodi lazo zonke iimeko kwaye wazise ummeli wakho we-HR, abaphathi, kunye nommeli womanyano ngeziganeko. Ungaze nanini na uzame ukuthatha izinto ezandleni zakho okanye ufumane isisombululo sokuziphindezela ngokwakho; Umsebenzi wokuxoxa kwaye uphelise ukuziphindezela kuwe ngummeli wakho we-HR kunye nabaphathi bakho.
Ukulwa Intlawulo yokuXhatshazwa
Ukuba ujongene nezityholo zokuhlukumeza emsebenzini, amanyathelo asibhozo axoxwe apha ngasentla anokukunceda ukuba ucoce igama lakho. Xa usebenza ukuzikhusela, hlala uzolile, sukuzama ukuxoxa ngezityholo nalowo utyholayo, kwaye uthembele kubungqina obungqongqo ukubonisa ubungqina bokuba umsulwa.
Ezinye Iziyobisi Cheerleading Cheers I-Asperger Syndrome Imizekelo Ye Tributes Given At Funerals Ifenitshala Yangaphandle
uyisusa njani i-watermark enkuni
leliphi icala ekufuneka intshontsho libe kulo ngaphambi kokuthweswa isidanga
loluphi uphawu oluhambelana ne-leo
uyenza njani umdaniso we-napoleon dynamite
impilo yokutya kwenja ukuphonononga imicimbi yabathengi
Ndingayinika ntoni inja yam urhudo